Ronaldo oo sheegay waqtigii ugu adkaa xirfadiisa & xilliga uu qorsheenayo inuu kaga fariisto kubadda cagta – Gool FM
(Yurub) 21 Agoosto 2019. Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa daaha ka qaaday sanadkii ugu adkaa ee noloshiisa shaqsiyeed, isagoo dhinaca kale tilmaamay in ka tagistiisii Real Madrid uusan aheyn go’aan fudud.
Wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ayaa soo xigtay wareysi uu ku bixiyay Cristiano Ronaldo mid ka mid ah Taleefishanada dalka Portugal waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“2018 wuxuu ahaa sanadkii ugu adkaa ee shaqadeyda heer shaqsiyeed”.
“Eedeynta kufsiga ee la ii soo jeediyay waxay aheyd mid xanuun badan, maxaa yeelay waxay su’aal ka keeneen sharafkeyga, laakiin ugu dambeyntii waxaa cadaatay inaan wax dambi ah laheyn, kuwa i jecelna wey ogaadeen arrintaas”.
Intaas kaddib Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu ka hadlay go’aankii uu kaga tagay kooxda Real Madrid wuxuuna yiri:
“Waxaan halkaas ku noolaa mudo sagaal sano ah, ma aheyn arrin fudud ka tagisteyda, laakiin waxaan doonayay inaan ciyaaro loolan kale ee cusub, waana ku faraxsanahay joogitaankeyga kooxda Juventus”.
Ronaldo ayaa wax laga weydiiyay xiliga uu jecelyahay inuu gabi ahaanba ka fariisto ciyaarista kubadda cagta wuxuuna ku jawaabay:
“Kuma fikirayo arrintaas, laga yaabee inaan ciyaaraha ka fariisto sanadka dambe, laakiin sidoo kale waan ciyaari karaa ilaa da’ada 40 ama 41”.
“Ma aqaano, laakiin waxa aan markasta sheego ayaa ah baahida loo qabo inaan ku raaxeysto xilligan, kartida waa mid aad u fiican waana inaan ku raaxeysto”.
“Waxaan haystaa qoys cajiib ah, shaqo cajiib ah, laakiin taasi maahan waxa i dhiirigaliya, ee waxa i dhiiragaliya ayaa ah jeceylka aan u qabo kubadda cagta iyo ku guuleysiga abaal-marino”.